Ciidanka gaarka ah Mareykanka ee ka howlgala gudaha Soomaaliya oo ay lasoo deristay qataro dheeraad ah – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka gaarka ah Mareykanka ee ka howlgala gudaha Soomaaliya oo ay lasoo deristay qataro dheeraad ah
Taliyaha ciidanka gaarka ah ee militeriga Mareykanka u qaabilsan qaaradda Afrika (AFRICOM) Jeneral Thomas Waldhauser ayaa shaaca ka qaaday in ciidanka qaaska ah ee Mareykanka ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya ay lasoo deristay qataro dheeraad ah.
Taliyaha oo isagoo ku sugan taliska AFRICOM ee magaalada Stuttgat ee dalka Jarmalka ayaa wareysi uu bixiyay ku sheegay in waqti kooban la hakiyay howlgalada xoogan oo ay ciidanka Mareykanka ka wadaan qeybaha kala duwan ee Soomaaliya, balse culeyska xoogan ay saareen in la dhiso awoodda ciidamada Soomaalida ah.
Sidoo kale, taliyaha ayaa tilmaamay in hadafka tababarkaasi uu yahay sidii sanooyinka soo socda loo tababari lahaa ciidanka Soomaalida ah, si ay awood ugu yeeshaan inay la wareegaan ammaanka guud ee dalka Soomaaliya, marka ay ciidanka AMISOM ka baxaan Soomaaliya sanadka 2018-ka.
Jeneraal Thomas Waldhauser ayaa qiray in howlgalka ciidankooda ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya uu noqday mid qatar badan, islamarkaana ay ciidankiooda ku talaabsanayaan dhabaha waxyeelada ah ee lagu dhisaayo ciidan Soomaali ah oo awood leh.
Sidoo kale, taliyaha ayaa xusay in howlgalada ciidanka qaaska ah ee Mareykanka la shaqeeya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay soo food saareen qataro badan ee howlgalka la-talinta ah, gaar ahaan howlgalada wadajirka ee goobaha dagaalka ka socdaan.
“Marka aad hesho wejiga ciidamada ku wehlinaayo, waa inaad u sheegtaa in unugyada aad la shaqeeynayso oo ay yihiin halka ay ka qaadanayaan howlgalka oo kooban oo aad u qatar badan” Sidaasi waxaa yiri taliyaha Mareykanka ee AFRICOM Jeneral Thomas Waldhauser.
Taliyaha ayaa dhinaca kale, sheegay in bilawgii dadaalkaasi ay xudun u aheyd sidii ciidanka loo bari lahaa asaaska dagaalka iyo sida loo kaxeyn karo gaadiidka dagaalka iyo isticmaalka hubkooda.
Jeneraal Thomas Waldhauser ayaa tilmaamay in ciidanka Mareykanka ee jooga Soomaaliya ay qaadaan howlgalada dagaalka ee tooska ah ee lagu beegsado bar-tilmaameedyada xerooyinka tababarka ee Xarakadda Al-shabaab iyo waxa u uugu yeeray warshadaha ay Shabaabka ku farsameeyaan miinooyinka.
Ugu dambeyntii, Jeneraal Thomas Waldhauser ayaa sheegay in qabsoomida doorashooyinka dalka Soomaaliya ay muujinayso inay soo hagaageyso xaaladda ammaan ee ka jirta dalka Soomaaliya, inkastoo uusan meesha ka saarin fal-celinta ay dagaalyahanada Al-shabaab geysan karaan.